MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward ထောဘီ - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
သင့်ရဲ့ဖုန်းဘေလ်ကို (၅)ဆထိ ပြောင်းလိုက်ပါ
ထောဘီဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ဖြင့် အများဆုံး MPT-MPT ဖုန်းခေါ်ရန် ၁၈၂မိနစ်(သို့) အင်တာနက်သုံးရန် 909 MB(သို့) MPT-MPT SMS ပို့ရန် အစောင် ၂၅၀ ရရှိအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
သောကြာနေ့တွင် ထောဘီ ဝယ်တိုင်း အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်ကို <Happy Friday Webpage>တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
– ထောပီဖုန်းဘေလ် အဖြစ်ပြောင်းခြင်း
ထောဘီ ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို စိတ်တိုင်းကျ သုံးနိုင်သည်။
· Htaw B ဖုန်းဘေလ်သည် အခြား operators များသို့ ခေါ်ဆိုခြင်း နှင့် SMS ပို့ခြင်း၊ VAS ဝန်ဆောင်မှှုများ ရယူခြင်းအတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
· Htaw B ဖုန်းဘေလ်ကို အခြားဖုန်းများသို့ မလွဲပြောင်းနိုင်ပါ။
· *224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး လက်ကျန် Htaw B ပမာဏ ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
· MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှှုကို ၂၀စက္ကန့်နှှုန်းဖြင့် ကောက်ခံပါမည်။
· အင်တာနက်အသုံးပြုမှှုကို 200KB နှှုန်းဖြင့် ကောက်ခံပါမည်။
၁။Htaw B ဆိုတာဘာပါလဲ?
Htaw B သည် MPTက အသစ်ပြင်ဆင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သည့် ဝန်ဆောင်မှှုဖြစ်သည်။ MPT သုံးစွဲသူများသည် လက်ကျန်ငွေ(ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်) ကို ထောဘီဖုန်းဘေလ်(ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်၏ ငါးဆ)အဖြစ် ပြောင်းလဲရုံသာမက Htaw B ဖုန်းဘေလ်ကို သတ်မှတ်နှှုန်းထားများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၃။ Htaw B ဖုန်းဘေလ်ကို ဘယ်လိုရယူ အသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ?
ထောဘီဖုန်းဘေလ်ရယူအသုံးပြုနိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ USSD(သို့) SMS(သို့) MPT4U App တို့အနက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
USSD ဖြင့် – *500#ကိုခေါ်ဆိုပြီး မိမိလဲလှယ်လိုသည့် ပမာဏကိုရွေးချယ်ကာ New Htaw B ဖုန်းဘေလ် (ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်၏ ငါးဆ)အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်(လက်ကျန်ငွေ) ၁၀၀၀ကျပ်ကို New Htaw B ဖုန်းဘေလ် ၅၀၀၀ကျပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် *5001# ကိုခေါ်ဆိုပါ။ ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်(လက်ကျန်ငွေ) ၂၀၀၀ကျပ်ကို New Htaw B ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀၀ကျပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် *5002# ကိုခေါ်ဆိုပါ။ ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်(လက်ကျန်ငွေ) ၅၀၀၀ကျပ်ကို New Htaw B ဖုန်းဘေလ် ၂၅၀၀၀ကျပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် *5005# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
MPT4U Application တွင်လည်း ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူခြင်းနေရာသို့ဝင်ရောက်ကာ New Htaw B ဖုန်းဘေလ်များလဲလှယ် ရယူနိုင်ပါသည်။